Mac Mini မှာ RAM ကိုချဲ့လို့ရမလား။ | ငါက Mac ပါ
Mac Mini အထိ RAM ကို Upgrade လုပ်ပါ
Jordi Gimenez | | Apple mac Mini ကို, Mac OS X ကို, NOTICIAS
Mac ကို ၀ ယ်တော့မယ်ဆိုရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့စက်အသစ်ကိုပေးမယ့်အသုံးပြုမှုနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာကိုအသစ်ပြန်လည်လုပ်ဖို့အချိန်လိုတာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ယခင်က Apple တွင်အသုံးပြုသူအချို့ရှိသည် သင်၏ Mac hardware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများ ဒီနေ့မှာတော့အချို့သော Macs တွေမှာ hardware တွေထည့်လို့ရနိုင်ပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာပြတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ iMac အသစ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။ ယခုထက်ပိုပြီး (လက်ရှိ ၂၇″ မော်ဒယ် မှလွဲ၍) RAM ထပ်ထည့်ပါသို့မဟုတ် hard disk ကိုပြောင်းလဲပါ။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည် Mac mini အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြပါ ဦး ။
entry-level Macs တစ်ခုကတော့ Mac mini ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒီကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ကွန်ပျူတာဟာ PC မှလာတဲ့မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆို ၀ ယ်ဖို့ Mac ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသည် ကွဲပြားခြားနားသော configurations နှင့်အတူ Mac mini ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကွန်ပျူတာကိုဖြစ်စေ, ဒါကြောင့်ဒီ Mac ပေါ်တွင်ရှိသောကြောင့်မော်ဒယ်ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ ချဲ့ထွင်မှုရွေးချယ်စရာများသည်ယနေ့အချိန်တွင်အနည်းငယ်သာရှိသည်.
1 Mac Mini အဟောင်းတွေမှာ RAM ကို Expand လုပ်ပါ
2 လက်ရှိ Mac Mini တွင် RAM ကိုပြောင်းခြင်း: မဖြစ်နိုင်ပါ
Mac Mini အဟောင်းတွေမှာ RAM ကို Expand လုပ်ပါ
ငါ Mac minis အကြောင်းပြောတဲ့အခါငါဆိုလိုတယ် Apple ကရောင်းတော့မယ့်သူတွေအားလုံးကို။ ငါသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းချသော Macs စီးရီးများဖြစ်သောကြောင့် Cupertino မှယောက်ျားများမှရပ်စဲခဲ့သော Mac mini ကိုခွဲခြားရန်ကျွန်ုပ်မသွားပါ။ ယနေ့သူတို့ PC မှလာကြပြီးသုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Mac တစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ ကိုယ်ပိုင်မော်နီတာ, ကီးဘုတ်, mouse ကို။
အစပိုင်းမှာငါ Mac အတွက်ဘာတွေသုံးတော့မယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြဖို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါက Apple ကိုအခြေခံအားဖြင့်ဒီကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ဖို့ခွင့်မပြုတဲ့ချဲ့ထွင်မှုရွေးချယ်စရာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတယ်။ ဤကိစ္စတွင် အကယ်၍ သင်သည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောတိုးတက်မှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်သေးငယ်သော်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်လောက်သော Mac mini နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပင်သိလိုလျှင်၎င်းကိုယခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ သမိုင်း၏လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်စုစည်းမှုကိုကျွန်ုပ်ရည်ညွှန်းသည်။ ၁၁ နှစ်လောက် ငါတို့ web ပေါ်မှာရက်အနည်းငယ်အကြာရေးသားခဲ့သည်သော ထိုအရာ၌သင်သည်မြင်လိမ့်မည် အလူမီနီယံ Mac mini စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းကစက်များချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်အညီပြောင်းလဲသွားသည် ထို့အပြင် Apple သည်ဤပြonနာအပေါ်ပိုမိုတင်းမာလာပြီးသုံးစွဲသူများကိုသူတို့၏ Macs များ၏အတွင်းပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ဘဲ၎င်းသည်ဘုတ်သို့တိုက်ရိုက်အစိတ်အပိုင်းများကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက် mini သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
လက်ရှိ Mac Mini တွင် RAM ကိုပြောင်းခြင်း: မဖြစ်နိုင်ပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်မည်သည့် Apple ကွန်ပျူတာကိုမဆိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမရှိဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၂၇ လက်မ iMac မှလွဲ၍ RAM ထပ်မံထည့်ရန်အဖုံးသေးသေးထပ်ထည့်ထားသော်လည်းကျန်သူများမှာမူဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ။ အသုံးပြုသူသည် Mac Mini အသစ်တွင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်ဘာမျှလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ အခြေခံအားဖြင့်အရာအားလုံးဟာ Motherboard ပေါ်မှာကပ်ထားတာတွေ၊
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်၌ Mac mini အဟောင်းတစ်ခုမှအစိတ်အပိုင်းအသစ်များမှတစ်ဆင့်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုမရောင်းပါနှင့်။ ယနေ့လည်းမှန်ကန်သည် "ဝါရင့်" Mac mini နှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ခက်ခဲသည် သူတို့က software Updates တွေကိုခွင့်မပြုတဲ့အပြင်တချို့ application တွေကိုသုံးဖို့ခက်ခဲတယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပိုဆိုးတာကဒါကိုသေးငယ်တဲ့ဘဏ္asာအဖြစ်သိမ်းထားဖို့အကြံပေးလိုတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာငါတို့က အိမ်မှာထည့်သွင်းပြီးယူရို ၅၄၉ ကျသင့်မည့် Mac mini entry ဖြစ်သည်၁.၄ GHz Intel Core i5 ပရိုဆက်ဆာ၊ ၅၀၀ GB သိုလှောင်မှု၊ ၄ GB RAM၊ ၅၀၀ GB hard drive၊ Intel HD Graphics 1,4 ဂရပ်ဖစ်နှင့် OS X El Capitan ။ ဒီစက်ကို iCixit မှတပ်ဆင်ထားသည့်ဘုရင်များကစာရင်းပေးပြီးဖြစ်သည် 6st အပေါ် 1 ပြုပြင်မှုများအတွက်၎င်း Apple ကွန်ပျူတာများကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်းတို့တွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုအစွမ်းထက်သော ၀ ယ်ယူမှုများနှင့် Mac mini မော်ဒယ်ကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မှတ်ရန် RAM သို့မဟုတ် disk ချဲ့ထွင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက် ဤ Mac minis တွင် (သင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။ ) ထို့ကြောင့်အစမှမြင့်မားသောချိန်ညှိမှုကိုရွေးချယ်ပြီးထိုမက်များကိုဖွင့်ရန်မေ့ပါ။
သင်အများစုက Mac mini ကိုအစကနေ ၀ ယ်မယ်ဆိုရင် desktop PC နဲ့လုပ်သလိုမျိုးပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ hardware တွေထည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Mac mini ထဲမှတစ်ခုကိုချဲ့ထွင်လိုပါကအလုံခြုံဆုံးမှာသင်၏အက်ပလီကေးရှင်း၏နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကွန်ပြူတာပညာရှင်တစ်ယောက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးချဲ့ရန်သို့မဟုတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းငယ်ပိုမိုသက်သာစေရန်နှင့်ထိပ်တန်းမော်ဒယ်လ်ကိုတည့်တည့်သွားရန်နှင့်နောင်တွင်ပြတ်လပ်မှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်။
Apple က Mac mini နဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုတိုးချဲ့ဖို့ပြproblemsနာတွေပိုများလာတယ် ကြောင်း 2016 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိသင့်ပါတယ် (ကသူ့အလှည့်) ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Apple mac Mini ကို » Mac Mini အထိ RAM ကို Upgrade လုပ်ပါ
ငါ့ mac mini ကို2Gb နှင့် 250 Hd သို့ချဲ့ပြီးပြီ !!!! ပြီးပြည့်စုံတယ်။
4gb ram ပါတဲ့ Mac mini G1.4 1ghz ရှိတယ်။ သင် 2gb module တစ်ခုထည့်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ် 1gb ကိုသာလက်ခံသလား။
သင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သင့်တွင်ဘဏ်တစ်ခုသာရှိပြီးအမြင့်ဆုံးမှာ 1Gb ဖြစ်သည်။ http://tinyurl.com/8lzv4e
Orlando တွင်ပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ mini ပါဝါ ၁.၄ မှကျားသစ်သို့မည်သို့တပ်ဆင်မည်၊ မွမ်းမံရမည်၊ ကျွန်ုပ်၌ dvd ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာသည်။ အမှားတစ်ခုမှမရရှိခဲ့ခြင်း၊ ကျားသို့ပြန်သွားရန် ဘယ်သူကငါ့ကိုကူညီပေးမှာလဲ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
orlando paez အားပြန်ပြောပါ
Orlando တွင် paez ဆ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် Mac Powerpc မှာ Gig တစ်ခုရှိတယ်၊ မင်းက2Gig ထားနိုင်တယ်။ ?
Orlando paez g သို့စာပို့ပါ
ငါပြောတဲ့အခြား G4 နဲ့အတူတူပဲ http://tinyurl.com/8lzv4e
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် Memory ကို PowerPC G4 - 1.42 Ghz သို့တိုးချဲ့လိုသည်။ စကားမစပ်ဖြင့် 80 GB လျော့နည်းနေသောအခြား hard drive တစ်ခုထည့်ထားသည်။
ဝက်ဘ်မှကျွန်ုပ် Mac အတွက်လိုအပ်သောမှတ်ဥာဏ်အတိအကျရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိမြင်ပါသည်။ သို့သော် hard disk မည်သည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုမည်သည့်နေရာမှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ SoydeMac.com ရှိလူများထံကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်ယူပါတယ်
ဒစ်ဂျစ်တယ် Diogenes သည်၎င်း၏အားသာချက်များရှိသည်
Mack lopez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ USB port လေးခုပါတဲ့ Mac mini ရှိတယ်။ ကောင်းပြီ၊ စစ်ဆေးသည်၊ ငါကအများဆုံး GB ကို 1 GB ထားဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်၊ အခု 512 သာရှိမယ်။ 1 GB GB RAM နှစ်ခုစီကို2GB ထားဖို့အကြံပေးသလား ??? ငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုတွေ့ချင်တယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ၁၀၀ ထည့်ထားတာအရမ်းကောင်းတယ်
mack lopez အားပြန်ကြားပါ
Max 1 GB အတွက်မှန်ကန်သည်ကိုသင်စစ်ဆေးခဲ့ပါကသင် 512 ၏ module နှစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ဖြေကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် mini rm ကင်မရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး scan တစ်ခုအား module တစ်ခုစီတွင် 1 GB ထည့်ထားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် ram နှစ်ခုကိုလည်းတင်မည်။ ငါ့လိုသေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ! ဤစာမျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဤတနင်္လာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်သိုးကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!!!!!!! ဒီမှတ်ချက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကဖတ်ဖူးရင်သင့် pc ကိုအလွယ်တကူမြန်နိုင်ရုံသာမကယုံကြည်စိတ်ချရလွယ်ကူစွာဖတ်ရင်ဒီစာမျက်နှာကိုငါအကြံပြုချင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုမင်းမှာအနည်းဆုံး intel core တစ်ခုပဲရှိမယ်။ နှစ်ခုဖျော်ဖြေပွဲထို့နောက် ...
ကျွန်ုပ် Mac Mini ၏ RAM ကိုချဲ့ချင်တယ်၊ ဘယ်မှတ်ဉာဏ်ကိုငါဝယ်သင့်သလဲ။
ဒီစာမျက်နှာတူညီတဲ့ကျနော့်သူငယ်ချင်းကမင်းရဲ့ mac mini ကိုစစ်ဆေးဖို့စကင်နာဖြစ်တယ်၊ ငါမြင်တယ်၊ မင်းကမင်း ၀ ယ်နိုင်တဲ့အရာတွေအပြင်ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကိုပြတယ်၊ သူတို့ကြီးတယ်၊ ငါမှာထားတယ်၊ သုံးရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ mac သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ပရိုဂရမ်ငယ်လေးဟုခေါ်သည်။
သိုးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့နေရာမှာအသံဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါ macnifico ကငါ့ကိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကငါ့ရဲ့ MacMini (520 မတိုင်မီ) မှာ 2Gb ရှိတယ်။
Macuser ပါ ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ Ram memory ကိုဒါမှမဟုတ် mini mac ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဖွင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူက monitor signal ကိုမပေးပါဘူး၊ ပါဝါဖွင့်သံကိုမထုတ်ပေးဘူး၊ Gb ကဒ် ၂ ခုထည့်လိုက်တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာကကတ်တစ်ကဒ်ကို 1 Gb တစ်ခုနဲ့အစားထိုးလိုက်တာ။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ပြီးတော့ငါမူရင်းကဒ်တွေကိုပြန်ပေးတယ်။
အမှတ်တရများဘာသာရပ်အပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ cum lauden စာမျက်နှာ။
ကောင်းပြီ၊ Memory ram ကိုတိုးမြှင့်တဲ့အခါ Mac mini ကိုရောက်ရင် cd ကိုသုံးဖို့လိုမလား။ သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်သည်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သလားကျွန်ုပ်၏ဗားရှင်း ၁၀.၄.၁၁ ရှိ၊ သိုးကိုပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုပြင်နိုင်မည်လားအဖြေကိုကြိုတင်အသိအမှတ်ပြုပြီးအလွန်ကောင်းသောစာမျက်နှာဖြစ်သည်။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က ၀ ယ်လိုက်ပြီ၊ အရင်ကတည်းက 16 GB RAM ထည့်ဖို့ရွေးလိုက်တယ်၊ ဒါကပိုစျေးကြီးတယ်၊ ငါကဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာပါ။ ဒါကြောင့်ငါထည့်လိုက်တဲ့ကြံကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဘာကြောင့်ဂဟေဆော်သလဲဆိုတာရှင်းရအောင်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးအကြီးဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေကို ၀ ယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုငွေသွင်းဖို့ပြောခဲ့တယ်။
Roberto Benavides ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် 2011 MacMini ရှိပါပြီ။ RAM slot နှစ်ခုပါရှိပါသည်။ ၎င်းကို28Gb card များသို့အဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်တစ်နှစ်နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ မျက်နှာပြင်သည် ၃ စက္ကန့်တိုင်းတွင် Beep နှစ်ခုပေးသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို RAM ပြသနာတွေပြောတယ်၊ ငါကဒ်နှစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ slot တစ်ခုကကဒ်ကိုလက်မခံဘူး (အမှားပေးတာ)၊ နောက်တစ်ခုကပြproblemနာမရှိဘူး၊ ငါက3Gb ကန့်သတ်ထားပြီး၎င်းသည်နှေးသည်။ အလုပ်မလုပ်သော slot ကိုပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလားသို့မဟုတ်ကဒ်တစ်ခုတည်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ခုခုရှိပါသလား။
Roberto Benavides အားပြန်ကြားပါ
Felix Boza Chaparro ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ရန်အတွက် ၂၀၁၄ အကုန်မှ Mac mini ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့ပါပြီ။ အမှန်တရားကတော့ Lightroom တွင်ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ခြေလှမ်းတိုင်းနှင့်နှေးနေပါသည် ဘောလုံးဟာလည်ပတ်နေပြီးစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်၊ ငါဝယ်ယူမှုမှာအမှားတစ်ခုလုပ်မိပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးသားပါ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂.၈ Ghz intel Core I2,8 ​​ပရိုဆက်ဆာ
8Gb 1600MHz DDR3 မှတ်ဉာဏ်
Macintosh HD ကို boot disk ကို
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ၎င်းသည် Ram memory ကိုချဲ့ထွင်ရန် Technical Service သို့ပို့။ ရနိုင်ပါသလား။
Felix Boza Chaparro အားပြန်ပြောပါ
ဒီနေရာမှာ Apple က R&D ကိုအောင်မြင်စွာရအောင် R&D ကိုသုံးသည်